Nónsteinn -2- Jabulela ukuphila emaphandleni. - I-Airbnb
Nónsteinn -2- Jabulela ukuphila emaphandleni.
905 okushiwo abanye
Indawo esepulazini ibungazwe ngu-Anna And Óli
U-Anna And Óli Ungumbungazi ovelele
Sincoma izivakashi ukuthi zibhukhe ubusuku obungu-2 e-Nónsteinn. Ziningi izindawo ongazihlola futhi uzijabulele phakathi nosuku bese emva kwalokho uphumule futhi ujabulele ukubuka.
Kirkjufell - Kirkjufellsfoss - Snæfellsjökull - Umhume wamanzi - amasimu e-lava - amabhishi amnyama - impilo yezinyoni - ukubukwa kwemikhomo - Ukubuka kwentaba - izibani zasenyakatho - ukushona kwelanga, ukuthula, izindawo zokudlela ezinhle nokunye okuningi ongakuthola lapha noma eduze kwakho.
I-Nónsteinn iyindawo ekahle yabasanda kushada, abashadikazi noma abangani.
Lona ngu-25.5 s.m. ikotishi. Yakhiwa ngo-2016 futhi inazo zonke izidingo eziyisisekelo. Kukhona ishawa, isitofu esincane, ifriji, i-microwave, nezitsha eziyisisekelo zokupheka ukudla okulula. Kukhona umbhede ongusayizi wendlovukazi nezihlalo ezithokomele ukuze ujabulele indawo ngaphandle. Sinayo enye ikhabethe esiliqashayo, i-Grásteinn. Ine-wifi enhle kakhulu.
4.99 out of 5 stars from 905 reviews
4.99 · 905 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-905
I-Snæfellnes Peninsula iyindawo ecebile ngobuhle bemvelo, ukubukwa kolwandle nezintaba ezinhle. Ungajabulela ukuqwala izintaba, igalofu, izinkambo zokugibela, i-sea angling kanye nokubuka imikhomo. I-Snæfellsjökull National Park iseduze futhi ungahamba ngesikebhe uye eWest Fjords noma ume esiqhingini saseFlatey. Ungase futhi uzame ukuvakasha kolwandle futhi ujabulele ukubuka iziqhingi ezingenakubalwa e-Breiðarfjörður. Le ngxenye yezwe iyimvelo nje kubo bonke ubuhle bayo.
Ibungazwe ngu-Anna And Óli
Zizwe ukhululekile ukubuza noma imiphi imibuzo oyidingayo. Futhi wamukelekile kakhulu ukuza endlini yethu ukuze sizoxoxa futhi nenkomishi yekhofi;)
UAnna And Óli Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: LG-REK-015952